3d လောကသို့စတင် ဝင်ရောက်ခြင်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
3d လောကသို့စတင် ဝင်ရောက်ခြင်း
3D ကို စိတ်ဝင်စားပြီး လေ့လာမယ် လို့စဉ်းစားတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သင်တန်းတွေ ရှားပါးတာကို သတိထားမိတယ်။ အဲဒါနှင့် အင်တာနက်ပေါ်တက် ရှာတော့လည်း မြန်မာလို အခုထိ ရှာမတွေ့ သေးဘူး။ ဒီဖိုရမ်မှာ လည်း 3D နှင့် ပတ်သတ်ရင် Engineering ဆိုင်ရာလောက်ပဲ တွေ့ ရတယ်။ အဲဒါနှင့် နောက် ဆုံးတော့ self study ပဲ လုပ်ရတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ပြောတဲ့ 3D က Animation နှင့် Game Development အတွက်ပါ။ 3D ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်း ကလည်း Game Development အတွက် စိတ်ဝင်စားရာကနေ ရောက်လာတာပါ။ ကျွန်တော်က System Developer ဘက် က လာတာပါ။ Programmer လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာရင်း နှင့် ပို ပြီး စိတ်ဝင်စားလာလို့တခြား ဝါသနာပါသူတွေနှင့် အတူဆွေးနွေးရအောင် လို့ ဒီသရတ်ကို ဖွင့်လိုက်တာပါ။
ကျွန်တော် က 3D မှာ မူကြို အောင်စပဲရှိသေးတော့ အခုပြောတာတွေက မှားလည်း မှားမယ်၊ မှန်ချင်လည်း မှန်မယ် သိသလောက် ပြောပြရတာပါ။ Pro တွေ ရှိရင်လည်း ကူညီပေးကြပါ။ Beginner ဆိုရင်လည်း ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနှင့် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ Game နှင့် Multimedia market အတွက် 3D market က နောက် ၁၀ စုနှစ် တစ်ခု အထိ မသေနိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တကယ်တော်ရင် လစာကောင်းကောင်းနှင့် အလုပ် မရတောင် ကိုယ်ပိုင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် Studio ထောင်ကြပေါ့။ :P
နောက် တစ်ချက်က လို အပ်တဲ့ အရင်းအနှီးပါ။ စက်ကောင်းကောင်းတစ်လုံး နှင့် အခွေဖိုး ရှိရင် လုံလောက်ပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်စာတော့ ကောင်းဖို့ လိုတယ်။
Autodesk က 3Ds max ကို USD 3500 ကျော်လောက် ရောင်းနေတာကို မြန်မာငွေ သုံးလေးထောင်လောက် နဲ့ ဝယ်လို့ ရတာပါ။ :D
Video Tutorial ခွေတွေလည်း လွယ်လွယ် နှင့် ဝယ်လို့ ရပါတယ်။
အခု ကျွန်တော်လေ့လာနေဆဲ နှင့် လေ့လာဖို့ ကြံရွယ်ထားတဲ့ Software တွေကတော့
Autodesk Maya (Tutorial တွေ တော့ ပြီးခါနီးပြီ။)
Autodesk Motion Builder (လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖန်တီးတာပါ။ ဥပမာ လူပုံကို ဆွဲပြီးတော့ လမ်းလျှောက်တာတို့ ဘာတို့ ပေါ့။)
Vue7(သဘာဝ ရှုခင်းပုံတွေကို ဖန်တီးဖို့ ပါ။)
Cinema 4D (Spiderman3ကို ဖန်းတီးခဲ့တဲ့ Software လို့ တော့ပြောတယ်။ များသောအားဖြင့် movie & cartoon တွေ အတွက် ဖြစ်မယ်)
အပေါ်က ပြောခဲ့တာကတော့ သိသလောက် ထင်တာပြောတာပါ။ Beginner ဖြစ်တော့ မှားချင်လည်း မှားပါမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ Desert Fox အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခိုင်မြဲ, စစ်မာန်, စိုးလေး, တီဘွား, လုလု, ကျော်တိုး, မောင်မျိုးသာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, arkaraung, centurymg, chitnyimalay, g00gle, JatH, linthuraaung, pannuko, shwemyay, thureinsoe, tu tu, Ye Aung, zo
ပြန်စာ - 3d လောကသို့စတင် ဝင်ရောက်ခြင်း
အပေါ်မှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ သလို ပဲ လေ့လာဖို့ 
၁။ စက်ကောင်းကောင်း တစ်လုံး
၂။ Software နှင့်
၃။ Tutorial ရှိဖို့ ပဲလိုပါတယ်။
Software နှင့် Tutorial တွေကို တော့ Size အရမ်းကြီးလို့ကျွန်တော် တင်ပေးလို့ မရဘူး။ ခွင့်လွှတ်ပါ။
အခုကျွန်တော်ပြောမှာက 3D workflow ပါ။ အခြေခံ လုပ်ငန်းစဉ်လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်။ Software တွေ ကွဲ ပေမယ့် အခြေခံကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်မှာပါ။
ပထမဆုံးကတော့ ကိုယ်ဖန်တီးမယ့် စိတ်ကူးကို စဉ်းစားတာပါ။ အရေးကြီးပါတယ်။ စာရွတ်ပေါ်မှာ အကြမ်းဆွဲထားတာ ပို ကောင်းပါတယ်။
2. Collecting Resources
လို အပ်သော အရာတွေကို စုဆောင်းထားတာပါ။ ဥပမာ ရေခွက် ပုံ ဆွဲမယ် ဆို ရေခွက် တစ်ခွက် ကို အနားမှာ ထားပြီးကြည့်ပါ။ ကားပုံဆို ရင် အင်တာနက် က ဖြစ် ဖြစ် ရုပ်ရှင်ထဲက ဖြစ် ဖြစ် ကားပုံလေး ကို စုဆောင်းထားပေါ့။
ပြီးတော့ ဘယ်လို ဆွဲရမလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။
စတင်ရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းပါ။ ကိုယ့် ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး အသေးစိတ်ကျမှု လှပသတ်ရပ်မှု က ကွာသွားပါတယ်။ များများ လေ့ကျင့်ဖို့ လိုပါတယ်။ များများလေ့လာဖို့ လည်းလိုပါတယ်။ ကိုယ် ဆွဲမယ့် ပုံရဲ့ ပုံကြမ်းပါ။
အပေါ်မှာ ပြီးသွားတဲ့ ပုံကြမ်းကို ဆေးခြယ်တဲ့ အပိုင်းပါ။ တစ်ရောင်တည်း ဖြစ်နိုင်သလို အခြား Image တစ်ခုလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပြသတဲ့အပိုင်းပါ။ အပေါ်မှာ ဖန်တီးထားတဲ့ အရာကို အလင်းအမှောင် ကင်မရာအနေအထားနဲ့ ကိုယ်ဖန်တီးတာကို ပြသဖို့ ပြင်ဆင်တာပါ။
6. Animation Creation
တကယ်လို့ လှုပ်ရှားမှုတွေဖန်တီးချင်ရင် လုပ်ဖို့ ပါ။ အသံနှင့် အခြား အရာတွေကို ထည့်ပါ။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ က အများအားဖြင့် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ပုံစံပါ။ အမြဲတမ်း ဖြစ်ရမယ် လို့မပြောပါဘူး။
ပြီးတော့ Software တစ်ခုတည်း သုံးပြီး အားလုံးကို လုပ်တာလဲ ဖြစ် ချင်မှဖြစ်မယ်။
စိတ်ကူးနှင့် လို သလို အသုံးချဖို့ ပါပဲ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ Desert Fox အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်မာန်, လုလု, မောင်မျိုးသာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, arkaraung, AZM, g00gle, JatH, minwinkhaing, pannuko, tu tu, Ye Aung, zo
20-06-2009, 07:11 AM
ပြန်စာ - 3D Software (Vue & SoftImage)
Desert Fox ပြောသလို 3D antimation နဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကတော့ အများကြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ လူပုံတွေ antimation လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လွယ်လွယ်နဲ့ ready made ရနိုင်တာက Poser software ပါ။ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ပုံတွေပုံလုပ်ချင်ရင်တော့ Corel Bryce ပါ။ သူကတော့ network rendering system ပါတော့ ကွန်ပျူတာများများ network ချိတ်ထားရင် အချိန်တိုတိုနဲ့ video output ထုတ်လို့ရတာပေါ့။ ကျန်တဲ့ တိုလီမိုလီကတော့ Xara, Ulead Inventor တွေလည်းစိတ်ကူးတဲ့သလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ အကြံပြုလိုသူများလည်းဆွေးနွေးပေးပါဦး။
Last edited by hta; 20-06-2009 at 07:14 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ hta အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မိုးပြာပြာ, လုလု, မောင်မျိုးသာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, arkaraung, centurymg, g00gle, JatH, pannuko, zo
ဟုတ်ပါတယ်။ အများကြီးပဲ။ အဲဒါကြောင့် ဆွေးနွေးချင်တာပါ။ tu tu တင် ထားပေးတဲ့ SoftImage က Devil May Cry4ကို ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ တော့ ကြွားထားတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ က နေပြီး 3D လှလှလေးတွေလုပ်ချင်တာ ကျွန်တော့် ဆန္ဒပါ။ ကျွန်တော် အချိန်ယူပြီး လေ့လာရင်း ရေးရင်း လုပ်သွားပါမယ်။ ဝါသနာရှင်အားလုံး ဝိုင်းဆွေးနွေးကြပေါ့။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ Desert Fox အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လုလု, ကျော်ခန့်ဇော်, မောင်မျိုးသာ, အေးချမ်းမောင်မောင်, arkaraung, centurymg, g00gle, linthuraaung, Lwin Thu, pannuko, zo
တည်နေရာ: မကွးမြို့ 
ပို့စ် 21 ခုအတွက် 43 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Poser software လေးများရှိရင် တင်ပေးပါလား ဗျာ ကျနော် ရှာတာ မရဘူး ဖြစ်နေလို့ပါ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ နောင်နောင်အောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နောင်နောင်အောင်
Originally Posted by နောင်နောင်အောင်
ဒီလင့်မှာ သွားယူလိုက်ပါခင်ဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေ ....
bonge, g00gle, Lwin Thu, pannuko, zo
15-08-2011, 01:21 PM
3d လောကသို့စတင် ဝင်ရောက် လာတယ် ဘာဆိုဘာမှမသိသေးရင် DAZ studio နဲ့စဖို့ မိတ်ဆက်ပါတယ် DAZ studio ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် 3D movie နဲ့ 3D ပုံတွေ အတွက်ပါ သူမှာက Figures လို့ခေါ်သော 3D လူသားတွေပါ ပါတယ် အဲဒီ လူသားတွေကိုကိုယ်လိုသလို ပြင်ဆင် လို့ရတယ် poser မှာရေးလာတဲ့ 3D လူသားတွေကိုပေါင်းပေးလို့လဲရတယ် လေ့လာဆဲ Beginner များအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောရမည့် Software ပါ
လူတော့ရပြီ အသုံးဆောင်တွေရော မရဘူးလာဆိုရင် အသုံးဆောင်ဆောင်တွေပါရတယ် ကိုယ်က ဆွဲနေစရာမလိုဘူး ဆွဲပြီးသားတွေက အများကြီးပဲ လိုသလို ပြင်တက်ရင်ရပြီ
ကျွန်တော်လဲ Beginner ဖြစ်လို့ ကူညီဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်
daz_studio/downloadသူက Free software ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ kyawminkhoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, arkaraung, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, Lwin Thu, pannuko, tu tu, zo
ဘူမှလဲမပါဘူး နာတစ်ယောက်ထဲပဲ ဒီမှာရှိတယ်
အမူးအရူးလေးပါ DAZ studio နဲ့ရေးထားတာ Figure က poser က ...... ဝါသနာရှင်ပါ ပညာရှင်မဟုတ်ပါဘူး လိုတာလေးလဲပြောပါ အပျော်တန်းရေးထားတာ
ကျော်တိုး, တေလေငှက်, bagothar85, g00gle, zo
Desert Fox တစ်ယောက်ပျောက်ချက်သားကောင်း လှချေလား။ပေါ်ကိုမလာတော့ဘူး။--Maya လေးနားထောင်ချင်လို့ပါ။
Daz 3D http://www.daz3d.com/i/3d/free-3d-software-overview က သူ့ဆော့ဝဲတွေ Feb လအတွင်း Free ပေးနေပါတယ်။
Account Register လုပ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ add to cart -- checkout လုပ်လိုက်ရင် ကိုယ့် email ကို serials ပို့ပေးပါမယ်။ download ကတော့ account profile မှာပါ။ တန်ဖိုးမနည်းလှတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ လိုင်စင်နဲ့ အလကား ရမှာမို့ အမြန်ယူထားသင့်ကြောင်းပါ။
Last edited by g00gle; 09-02-2012 at 03:14 AM..
စွမ်းကမ္ဘာ, မြန်အောင်သား, bagothar85, kyawminkhoung, putty, tu tu, zo
မြန်မာပြည်မှာ poser သင်တန်းကောင်းကောင်းတတ်ချင်လို့ပါ သင်တန်းကောင်းလေးများသိတဲ့သူရှိရင်လမ်းညွှန်ပေးကြပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ akyikoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by akyikoung
မြန်မာပြည်မှာ poser သင်တန်းကောင်းတော့မသိဘူး ဒီစာအုပ်လေးက poser7Practial ပါ.. လိုချင်ရင်ယူလိုက်...အခြေခံကနေရေးထားတာ..ကျွန်တော်လိုဘာမှမတက်သေးသူတွေအတွက်တော့အတော်ကောင်းဗျ
poser7Practial ဒီစာအုပ်ကိုပြီးအောင်ဖတ်ပြီးရင်သင်တန်းတောင်တက်စရာမလိုလောက်ဘူးထင်တယ်
ဖြစ်နိုင်ရင် 3d နဲ့ဆိုင်တာလေးတွေလဲမျှဝေရေးသားပေးစေချင်ပါတယ်
Last edited by kyawminkhoung; 27-06-2012 at 12:23 PM..
27-06-2012, 05:15 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ akyikoung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
autodesk, software guide
classes in C++ green leaf ဆွေးနွေးချက်များ 16 07-06-2013 10:39 AM
Hardwareအသစ်တွေနှင့်အနည်းငယ်မိတ်ဆက် mmmaung Hardware များဆိုင်ရာ 35 10-08-2010 08:29 AM